Waddooyinka Muqdisho oo Caawa xiran & Ciidamo... | POHSOMEV.COM
Waddooyinka Muqdisho oo Caawa xiran & Ciidamo...
posted by admin on Tue, 02/20/2018 - 22:46
Muqdisho (- Online)-Waxaa caawa inta badan xiran waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo ay tuban yihiin ciidamada amaanka Nisa iyo Booliska.
Ciidamada ayaa Gaadiidka dagaalka ku jaray waddooyinka waxaana laga celinayaa dhammaan gaadiidka raaxada iyo kuwa BL-ka.
Dhexbartanka iyo hareeraha waddooyinka ayaa waxaa la arkayaa shacab farabadan oo ku lugeynaaya kuwaa oo hoyaad u ah xaafadahooda.
Dadka lugeynaayo ee shacabka ah ayaa intooda badan waayay gaadiidka ay ku gaari lahaayen xaafadahooda, taa oo ay ku eedeynayaan dowlada Somalia oo xili gabal dhac ah waddooyinka ka xiratay shacabka u hoyaadaya guryahooda.
Wadooyinka xeran waxaa kamid ah Km4 ilaa Isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho Dadka ayaana ah caawa kuwo lugeynaya iyadoona hareeraha wadooyinka ay taaganyihiin ciidamada Amaanka ee dowlada Somalia.
Si rasmi ah looma oga sababta ka danbeysa xirnaanshaha wadooyinka xiran inkastoo shacabka ay xirnaanshiyaha waddooyinka u barteen xiliyada ay magaalada Muqdisho ka dhacayaan shirarka.- OnlineXafiiska Muqdisho-@live.com